အမေရိကတိုက်ကြီးများတွင် မူလနေထိုင်သူများ၏ ဒဏ္ဍာရီများ - ဝီကီပီးဒီးယား
အမေရိကတိုက်ကြီးများတွင် မူလနေထိုင်သူများ၏ ဒဏ္ဍာရီများ
အမေရိကတိုက်ကြီးများ၏ မူလနေထိုင်သူများတွင် အမျိုးမျိုးသော ယဉ်ကျေးမှုများရှိကြသည်။ မျိုးနွယ်တစ်ခုစီ၌ ကိုယ်ပိုင်ဒ ဒဏ္ဍာရီများရှိကြသည်။ အချို့မှာ အတော်လေးသိသာထင်ရှားသည်။ သို့ရာတွင် အချို့သော အဓိကအကြောင်းအရာများကို ထိုယဉ်ကျေးမှုနယ်နိမိတ်များ၌ မျှဝေသုံးစွဲကြသည်။
ကွိုင်းယို့တ်ခေါ် ခွေးဝံပုလွေနှင့် အပေါ့်ဆမ်ခေါ် သားပိုက်ကောင်မျိုးတို့သည် အချို့သော မျိုးနွယ်စု၏ ပုံပြင်များ၌ ပါဝင်ကြသည်။
၂ အခြားသော အမေရိကဒေသများ
အမေရိကတိုက်ကြီးများ၌ မူရင်ဇာတိနေထိုင်သူများတွင် ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုတည်းရှိသည်မဟုတ်ဘဲ ဘာသာရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ယုံကြည်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရိုးရာဇာတ်လမ်းများ၏ များပြားလှသော ကျမ်းစာများရှိကြသည်။ ထိုဇာတ်လမ်းပုံပြင်များသည် မိခင်သဘာဝတရားကြီးကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အခြေခံထားကြ၍ ရာသီ၊ မိုးလေဝသ၊ အပင်၊ တိရစ္ဆာန်၊ မြေ၊ ရေ၊ မီး၊ ကောင်းကင်၊ ကောင်းကင်ဘုံလာ အရာများတို့၏ အမှတ်သင်္ကေတများဖြင့် ကြွယ်ဝပည့်စုံသော ပုံပြင်များလည်းဖြစ်သည်။ မျှဝေသုံးစွဲထားသော အခြေခံအခြင်းအရာများမှာ ကျယ်ပြန်သော၊ အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော အရာအားလုံးကို သိမြင်တော်မူသော ကြီးကျယ်သည့် ဝိဉာဉ်တော်ဖြစ်၍ ကမ္ဘာလောကနှင့် ထိုကမ္ဘာမြေရှိ တောတောင်ရေမြေတို့၏ ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ ကောင်းကင်၌ အပြိုင်လောကတစ်ခု ( ရံခါ၌ မြေအောက်ကမ္ဘာ နှင့်/သို့ ရေအောက်ကမ္ဘာ) တစ်ခုရှိသည်ဟု ယုံကြည်မှု၊ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေသော ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များ၊ တမလွန်ကမ္ဘာ (နယ်မြေ) သို့သွားရောက်ခြင်၊ မြင့်မြတ်သော ရှေးဟောင်းဘိုးဘေးများနှင့်ပတ်သက်သည့် စုစည်းထားသော အမှတ်တရများပါဝင်ကြသည်။
ဒဏ္ဍာရီများစွာ၏ ဝိသေသတစ်ခုမှာ လူသားနှင့် တိရစ္ဆာန်တို့ကြားက ဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်ခုကြား အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းများပါဝင်သည်။ လူသားတို့နှင့် အခြားမျိုးနွယ်များ (အထူးသဖြင့် ဝက်ဝံ)ကြား လက်ထပ်ခြင်းများသည် တူညီသော အဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်၏ ။ အချို့သော ပုံပြင်များတွင် တိရစ္ဆာန်များသည် လူသားကလေးငယ်များကို မွေးမြူပျိုးထောင်ကြ၏ ။
မြောက်အမေရိက ဒဏ္ဍာရီအများစုသည် လေးနက်သော်လည်း အချို့ဒဏ္ဍာရီများသည် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ကျင့်တရားဆိုင်ရာ သတင်းစကားများကို သယ်ဆောင်ထားသောကြောင့် ဖျော်ဖြေနိုင်ရန်အလို့ငှာ စိတ်နှလုံးပေါ့ပါးစေသော (မကြာခဏဆိုသလို လိမ်လည်လှည့်ပတ်သောပုံစံဖြင့်) ဟာသများကို သုံးနှုန်းထားသည်။ ခိုင်းနှိုင်းတင်စာချက်မှာ တူညီကြသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းသဘောတရားများမှသည် ကြမ်းတမ်းခြင်း၊ စိတ်နှလုံးဝေဒနာ စသည်များအထိ စူးစမ်းတင်ပြထားကြသည်။
အချို့သော ဒဏ္ဍာရီများသည် အက၊ ဂီတ၊ သီချင်း၊ အိပ်ငွေ့ခြခြင်း အက(ဥပမာ နေအကကဲ့သို့[မှတ်စု ၁]) ရိုးရာဘာသာရေး ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ဤဒေသမှ ဒဏ္ဍာရီအများစုကို မျိုးနွယ်ပညာရှင်များက (၁၉)ရာစု နှောင်းနှင့် (၂၀)ရာစုအစောပိုင်းများတွင် ပထမဆုံး မှတ်တမ်းအဖြစ်ရေးမှတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤရင်းမြစ်များကို ရှေးဟောင်းဘိုးဘေးတို့၏ ရိုးရာအစဉ်အလာများကို မိမိရရ ပတ်သက်ခဲ့ကြသော ဒေသခံအမေရိကန် သက်ကြီးပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ စုဆောင်းယူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းဇာတ်လမ်းပုံပြင်များ၏ အစစ်မှန်ဆုံးနှင့် ရှင်သန်လျှက်ရှိသောမှတ်တမ်းများအဖြစ် ယူဆနိုင်သည်။
အလယ်ပိုင်း အမေရိကဒဏ္ဍာရီများအနက် မိုင်းယာလူမျိုးတို့၏ ဒဏ္ဍာရီပါဝင်သည်။ တောင်အမေရိကတိုက်တွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ဒေသများမှ လူမျိုးတို့၏ ဒဏ္ဍာရီများလည်းရှိကြသည်။ ဥပမာ ဂွားရာနီး၊ အင်ကာ ဒဏ္ဍာရီတို့ဖြစ်ကြသည်။
↑ လူမှုမျိုးနွယ်ကိုယ်စား အချို့သူများသည် မိမိကိုကိုယ် အသက်စတေး၍ ပူဇော်ခြင်း ဓလေ့ရိုးရာအက
↑ Q. L. Pearce (11 May 2012). Native American Mythology. Greenhaven Publishing LLC, 10–. ISBN 978-1-4205-0951-9။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမေရိကတိုက်ကြီးများတွင်_မူလနေထိုင်သူများ၏_ဒဏ္ဍာရီများ&oldid=522110" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၉:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။